DEG-DEG: Chelsea Oo Saxeex Hadda Samaysay, Booska Uu Ka Ciyaaro & Shaqada Waalida Ah Ee Blues Ee Suuqa Oo Sii Socota - Gool24.Net
DEG-DEG: Chelsea Oo Saxeex Hadda Samaysay, Booska Uu Ka Ciyaaro & Shaqada Waalida Ah Ee Blues Ee Suuqa Oo Sii Socota
Kooxda Chelsea ayaa samaysay saxeex kale walow uu suuqa rasmiga ah ee qaarada Yurub xalay xidhmay waxaana ay la wareegeen goolhayaha da’yarka ah ee Sami Tlemcani oo kaga soo biiray dhinaca kooxda ree France ee Paris FC.
Sami ayaa horumarkiisa kusii wadi doona kooxda Chelsea oo uu hadda ka tirsan yahay kaddib markii ay Blues iyo Paris heshiis buuxa gaadheen.
Paris ayaa ah koox ka tirsan heerka labaad ee dalka France iyadoo Sami Tlemcani uu yahay goolhaye da’yar 16 sano jira ah oo bilooyinkii ugu dambeeyay kooxda koowaad ee Paris FC kasoo tirsanaa.
Tlemcani oo ka tirsan da’yarta heerarka kala duwan ee xulka qaranka France ayaa labadii sano ee ugu dambeeyay kusoo qaatay Paris FC isaga oo 15 sano jir loogu soo dalacsiiyay kooxda waaweyn ee Paris FC lagana soo saaray da’yarta.
“Waa iftiin cusub oo usoo baxay horumarka kooxda caasimada (Paris), kaas oo u ogolaaday da’yarka Sami Tlemcani inuu ku biiro mid kamida kooxaha ugu waaweyn Yurub sanadahan dambe” ayaa lagu yidhi warbixin ay kooxdii Sami soo saartay.
Tlemcani ayaa noqonaya goolhayihii labaad ee mudo kooban dhexdeed dhinaca France kaga yimaada Chelsea maadaama ay kooxdaasi Edouard Mendy kala soo saxeexatay dhinaca Rennes dhawaan.
Blues ayaa haatan u muuqata kooxda inta ugu badan garanaysa macnaha ay leedahay inaad goolhaye fiican garoonka ku dhex haysato kaddib qaab ciyaareedyo dib u dhac ku keenay oo uu Kepa Arrizabalaga muddooyinkii ugu dambeeyay sameeyay.
Shaqadan ayaa kamid ah saxeexyadii cajiibka ahaa ee ay Blues soo samaysay gudaha suuqii xalay xidhmay maadaama oo ay lasoo wareegeen toddoba ciyaaryahan oo kooxda koowaad ah.